Markay Madaxdeennu Dhageysiga ka doorbidaan Qoraalka. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka October 23, 2017	0 205 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Aalaaba way fududahay inaad wax bedesho. Balse way kasii fududahay marka aad hoggaamiye u tahay umad dhan.
Ficillada qof kasta uu kusoo muuqdo, saameynta ay yeelanayaan waxaa go’aamiya heerka magac ama mansab oo qofku nolosha ka gaarsiisan yahay.
Waxaa jiray waqti Burkina Faso laga xiran jiray dhar lagu sameeyey gudihiisa. Suuf lagu beeray kadibna lagu sanceeyey dalka ayaa min madaxweyne ilaa muwaadin ka wada sinnaa xirashadiisa. Taasi waxay abuurtay laba mid: in ganacsatadu sameeyaan maal-gelin xoog leh oo dalku uu iskaga filnaado qeyb ahaan dharka dunida kale looga soo waarido iyo in muwaadiniintu ka xoroobaan fikradda caqli gumeysi ee Faransiiskii xukumi jiray.
Ray Bradbury ayaa wuxuu leeyahay: uma baahnid inaad gubto buugaag badan si aad u dumiso dhaqan umadeed. Waxaa kugu filan inaad dadka ka joojiso inay wax aqriyaan.
Aragtida sawirradan madaxdeenna laga soo qaadayna waxay liifadda ugu yaraan – iguba colaadiye – u gaabinaysaa sida aan umadeenna uga guurin karno dhaqanka dhageysiga iyo hadalka ku siman: uguna diyaarin karno ilbaxnimada cusub ee wax qorista iyo aqrinta.
Waxaa kun jeer ka cudurdaaranayaa haddii dhanbaalkan kooban loo fasirto sida qaldan – qof iyo garaadkiis. Ku-tala-galkaygu wuxuu ahaa inaan iftiimiyo haddii aan u baahannahay sida madaxda kale in kuweennu ay si ficil ah u meteli karaan weerta caan baxday ee tiraahda: “Wixii qoran baa quruumo haree, muxuu hadal qiimo leeyahay?!”
Previous: Masjid ‘Hoy iyo Hunguri’ siinaya dadka Dibjirta ah.
Next: Madaxweyne Macron oo ka carooday fal uu eygiisa ku kacay xilli uu shir ku jiray.
Masaajidda Dewsbury oo u midoobaya inay caawiyaan Keydka Cunnooyinka.
Daawo – Balastikada oo laga sameynayo Sancooyin kala duwan sida Dhismaha Guryaha.
Baro sida Qashinka Lacag looga sameeyo